Bank card and Bank Account တွေနဲ့ Online Payment အသုံးပြုသူများ သတိထားနိုင်ရန် | Online Service Center Myanmar -->
Bank card and Bank Account တွေနဲ့ Online Payment အသုံးပြုသူများ သတိထားနိုင်ရန်
ဒါကတော့ ဘဏ်ကတ်တွေ၊ ဘဏ်အကောင့်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ငွေပေးချေမှုတွေပြုလုပ်တဲ့သူတွေ သတိထားမိနိုင်အောင်လို့ အခု SS ထဲက အစ်မတင်ထားတဲ့ Post အောက်မှာ Comment သွားပေးထားတာလေးကို အနည်းငယ်ထပ်ဖြည့်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် သုံးစွဲနေတဲ့ User ရဲ့ အမှတ်မထင် ပေါ့လျော့လိုက်မှုကြောင့်သာ ငွေကြေးတွေကို အခုလိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာများပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ဘဏ်ကတ် or ဘဏ်ကတ်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုတွေမှာ အသုံးပြုနေပြီဆို ဒါလေးတွေကိုတော့ မဖြစ်မနေ ဗဟုသုတရဖို့ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။
သူ့ ဘဏ်ကတ်ထဲကနေ ငွေတွေဘယ်လိုကြောင့်အခိုးခံရတာဖြစ်နိုင်လဲ?
အခုရက်ပိုင်းတွေထဲမှာ တော်တော်များများအလိမ်ခံနေရတဲ့ ဖုန်းတွေဆက်ပြီး ဘယ်ကနေကံထူးလို့၊ ညာကနေကံထူးလို့ သင့်ဘဏ်ကတ်နံပါတ် 121345 နဲ့စပြီး 67890 နဲ့ဆုံးတဲ့ကတ်က အချက်အလက်လေးတွေကို ပေးပို့ပြီး Confirm လုပ်ပေးပါ။ အဲ့လို Confirm လုပ်ပေးမှ သင့်ကံထူးထားတာကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ ဆိုတဲ့ လိမ်နည်းမျိုးမှာ ယုံပြီး ကိုယ့် ဘဏ်အကောင့် or ဘဏ်ကတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပေးလိုက်မိလို့ပါသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။
Online ပေါ်မှာ ငွေပေးချေမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့ Phishing( အစစ်နဲ့ခွဲမရတဲ့ အတု အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ Website ) ထဲမှာ ဘဏ်ကတ် or ဘဏ်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Security PIN တွေ Account info, Card info, တွေကို အမှတ်မထင်ဖြည့်မိလို့ ကိုယ့် ဘဏ်ကတ် or ဘဏ်အကောင့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေရသွားလို့ ပါသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
တခါတလေ လိုင်းသုံးနေရင် Ad Malware ဝင်နေလို့ Browser ကြီးပွင့်သွားပြီး စက်ဝိုင်းလှည့်ခိုင်းပြီး iPhone တွေကံထူးတာမျိုး၊ သင့် IP address က ဒီနေ့ ကံထူးသွားလို့ Google က ပေးတဲ့ သို့မဟုတ် အခြား ဘယ်ဟာကပေးတဲ့ ဒီလက်ဆောင်ကို $1 လောက်နဲ့ရမှာပါ ဆိုပြီး ဘဏ်ကတ်တွေဖြည့်ခိုင်းတာမျိုးတွေမှာထည့်လိုက်မိလို့ပါသွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
Email ထဲကို မသိရင် Bank ဘက်ကနေ ပေးပို့လာတဲ့အတိုင်း သင့်ဘဏ်ကတ် or ဘဏ်အကောင့်က ဘာလုပ်ဖို့လုပ်နေလို့ ဒီအချက်လေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါ ( သို့မဟုတ် ) မေးလ်ပြန်လည်ပေးပို့ပေးပါ ဆိုပြီး မယုံ ယုံအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ Phishing mail နဲ့မိသွားလို့ ဘဏ်ကတ် or ဘဏ်အကောင့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေပါသွားပြီး ငွေတွေပါသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်ပြီး ဘဏ်ကတ် ရှေ့ခြမ်း၊ နောက်ခြမ်းပုံကို တစုံတယောက်ကိုပေးမိတာ ( သို့မဟုတ် ) ကိုယ့် Account Messenger ထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ထည့်ထားမိတာမျိုးတွေရှိလို့ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို သူများ ခိုးဝင်တဲ့အချိန် ဘဏ်ကတ် or ဘဏ်အကောင့် နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိပြီး ပါသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ ဘဏ်တွေဘက်က ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာတွေ၊ Security ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို အရမ်းအလေးထားပြီး Secure ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ တော်ရုံနဲ့တော့ အဖောက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ဘဏ်ရဲ့ဆာဗာကိုသာ အဖောက်ခံလိုက်ရရင် ဒီလိုဘဏ်ကတ်လေးထဲကနေ ယူမှာမဟုတ်ပဲ တကယ့် ဘဏ်အကောင့်ကြီးတွေထဲက ငွေအမြောက်ကိုပဲ ယူသွားမှာသေခြာတယ်။
အခုဟာက ဘဏ်ကတ်ထဲကပဲ ယူသွားတာဆိုတော့ ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ကိုင်ထားတဲ့ သုံးစွဲသူ User ရဲ့ Security ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှုကြောင့်လား( ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးပဲ )ဆိုတာကိုတွေးမိတယ်။ ( နောက်ပို့စ်တခုအောက်က Comment တွေကိုဖတ်မိတော့မှ User အားနည်းချက်ရှိသွားလို့ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ )
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အခုလိုဖြစ်တာမှာ နောက်ကြောင်းတွေ ပြန်လိုက်လို့ရတာများလို့ ဘဏ်နဲ့သေခြာချိတ်ဆက်ပြီး နောက်ကြောင်းလိုက်ကြည့်ပါ။ Visa Card က တကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ကျက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စအတွက် ဘဏ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။
အဲ့ဒီလိုတွေ မပါနိုင်အောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
1. Security ပိုင်းလေးတွေကို အလေးထားပြီး သေခြာလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
2. Security ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Knowledge လေးတွေရှိထားဖို့လိုပါတယ်။
Online ပေါ်မှာ ငွေပေးချေမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘဏ်အကောင့် or ဘဏ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်စွက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ဖြည့်စွက်လိုက်တဲ့အရာက Official ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သေခြာလေးစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ Phishing Website တွေဆိုတာက အစစ်နဲ့ခွဲခြားမရအောင် ပြုလုပ်ထားကြတာမို့လို့ပါ။
မ Suu Yadanar တင်ထားသည့် Post ၂ ခု။
မူရင်းတင်ထားတဲ့ SS Post 1 => https://www.facebook.com/yadanar.nwe.56/posts/3127432677271679
မူရင်းတင်ထားတဲ့ SS Post2=> https://www.facebook.com/yadanar.nwe.56/posts/3127744207240526
အားလုံးပဲ သတိထားပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
Aung Kyaw Soe ( 17.12.2019 - 10:32 PM )
Knowledge Security Sharing